Android 6.0 OTA azo alaina amin'ny Nexus | Androidsis
Manuel Ramirez | | Rohy, Tutorials
Araka ny nolazain'i Google tamin'ny hetsika natao tany San Francisco talohan'ny faran'ny volana septambra, herinandro ary tsy ho ela dia hanomboka izy ireo zarao ny sary sy ny OTA amin'ny fitaovana Nexus izay hahazo Android 6.0 Marshmallow. Ireto fitaovana ireto dia ny Nexus 5, Nexus 6, Nexus 7 2013, Nexus 9 ary Nexus Player, raha mbola mijanona amin'ny Android Lollipop kosa ireo teo aloha na dia hahazo fanavaozam-baovao manakiana izay mifandraika amin'ny fiarovana sy ny fametahana ireo marefo aza.
Ora vitsy lasa izay dia namoaka ireo sary tao amin'ny ozinina i Google, ary tsy ela akory izay dia efa nanomboka izy ireo mahazoa rakitra OTA ho fanavaozana ny tanana ary mora kokoa noho ilay voalohany. Etsy ambany no hahitanao ireo rakitra OTA rehetra misy hatreto, ireo ozinina ary ny fomba tokony hanavaozanao raha tsy tianao ny miandry azy ho tonga hanararaotra ireo tombontsoa rehetra misy ao amin'ny Android 6.0, izay anisan'ireo tena mahavariana ny fahazoan-dàlana ho an'ny fampiharana vaovao, ny fiainana bateria nohatsaraina sy ny antsipiriany hafa hodinihina toa ny Google Now amin'ny Tap.
1 Ireo OTA an'ny Nexus isan-karazany
2 Misintona OTA
2.2 Nexus 9 Wi-Fi
2.5 Rohy 6
2.6 Rohy 5
3 Sarin'ny orinasa an'ny Nexus rehetra
Ireo OTA an'ny Nexus isan-karazany
Taorian'ny nahazoantsika ireo topy maso an'ny developer 6.0 isan-karazany tato anatin'ny volana vitsivitsy dia manana isika izao ny kinova farany an'ny Marshmallow. Manana ny safidy miandry andro vitsivitsy ianao handraisana ny OTA amin'ny fitaovanao manokana hahafahanao manao azy ho azy nefa tsy manao na inona na inona, manana ny safidy hidirana amin'ny fisie ZIP etsy ambany ianao avy amin'ireo URL ananantsika.
Afaka mahafantatra ianao ny vicissitude rehetra Android 6.0 Marshmallow avy amin'ny this entry raha manavao ny terminal Nexus-nao ianao.
Ireo fisie OTA ireo dia rakitra ZIP mitovy amin'izany zaraina amin'ny fitaovana raha niandry izany ny fandefasan'i Google tenany ho fizotrany mandeha ho azy izay tsy maintsy ekenao fotsiny fa manomboka ny fanavaozana.
Ny fizotry ny fanavaozana dia tokony tsy hisy olana, fa manoro foana an'izany izahay manaova backup na inona na inona. Afaka mijanona ianao ity mpitari-dalana ity hanaraka ny dingana rehetra hametrahana ny rakitra ZIP.
5.1.1 LMY48M -> 5.1.1 LMY48T (Fanavaozana ny fiarovana ny volana Oktobra, ilaina amin'ny Marshmallow OTA)
Miandry ny fahazoana azy.
Tsy ho ela dia misy.
Sarin'ny orinasa an'ny Nexus rehetra
Fanatsarana ny ny rakitra ZIP dia tsotra kokoa noho ny fanaovana azy amin'ny sarin'ny orinasa. Raha manaraka ny dingana rehetra dia vita tanteraka izany, saingy angamba mila mpampiasa mandroso kokoa ianao hanavao azy.
Afaka mandalo ianao ho an'ity fidirana ity for araho ny dingana rehetra ary avy eo azonao atao ny misintona ny sarin'ny fitaovanao mba hizotra tsara ny zava-drehetra. Ampahatsiahivo anao ihany koa fa tsy maintsy manao backup ianao raha sendra misy olana tampoka. Aleo misoroka toy izay mitsabo.
Raha fintinina dia tokony apetraho ny SDK Android, sokafy ny bootloader, ampidino ny rakitra ary afindra amin'ny finday ary apetraho amin'ny alàlan'ny baiko fastboot.
Hihaona indray izahay miaraka amin'ireo rakitra ZIP sy sary misy an'ny orinasa ho an'ny fanavaozana Android manaraka amin'ny endrika famoahana mpamorona ho an'ny taona manaraka ao amin'ny Google I / O 2016.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Rohy » Android 6.0 tonga amin'ny Nexus 5, 6, 7, 9 ary ny Player amin'ny alàlan'ny sary OTA sy ny ozinina